Cali Khaliif oo safar dhulka ah ku yimi Hargeysa, una duulay Djibouti ka dib markii laga hor istaagay Buuhoodle inuu ka dhoofo | Berberanews.com
Home WARARKA Cali Khaliif oo safar dhulka ah ku yimi Hargeysa, una duulay Djibouti...
Cali Khaliif oo safar dhulka ah ku yimi Hargeysa, una duulay Djibouti ka dib markii laga hor istaagay Buuhoodle inuu ka dhoofo
Hargeysa-(Berberanews)-Madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galaydh oo shalayto ciidammo beeleed deeganka Buuhoodle ku sugan ay u diideen in uu ka duulo garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle oo safar dhulka ah ku tagay Hargeysa ayaa Jabuuti uga sii duulay.
Xukuumadda Somaliland, ayaa ka hadashay Socdaalka uu Madaxweynaha Khaatumo Cali Khaliif Galaydh ku yimi gelinkii hore ee Isniintii Maanta magaalada Hargeysa oo isaga iyo Xubno la socday uga sii dhoofeen dalka Jabuuti oo uu ka furmayo wejiga labaad ee wadahadalka u dhexeeya Somaliland iyo Khaatumo.
Wasiirrada Arrimaha Gudaha iyo Qorashaynta Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Farotoon) iyo Maxamed Ibraahin Aadan (Qabo), ayaa ka hadlay Socdaalka Cali Khaliif ku yimi Hargeysa, waxaanay sheegeen in markii Malleeshiyo hubaysani u diidday inuu Buuhoodle ka dhoofo Axaddii shalay ka dib loo oggolaaday inuu Hargeysa ka dhoofo, waxaanu xalay ka soo gaadhi kaga soo ambabaxay magaalada Buuhoodle, isaga oo isla xalay soo gaadhay Burco, oo uu Waabberigii ka soo kallahay.
Wasiir Farotoon oo Maanta Saxaafadda qaarkeed kula hadlay Hargeysa, ayaa sheegay in ay Cali Khaliif Galaydh u aqoonsan yihiin Muwaaddin reer Somaliland ah, balse aamminsan fikrad ka duwan ta dadweynaha Somaliland aamminsan yihiin.
“Waa run Cali khaliif Galaydh Hargeysa ayuu maanta yimi, isaga oo ka soo ambobaxay gobolka Buuhoodle, soona maray waddada laamayga ah ee ka timaadda magaalada Laascaanood, ee soo gasha magaaladda Burco, halkan (Hargeysa) ayuu ku Waabberiistay, waxaanu ka duulay Garoonka Hargeysa, Isaga oo u sii jeeda waddanka Jabuuti oo uu ka furmayo wadahadalkii u dhexeeyay Khaatumo iyo Somaliland.” Sidaa ayuu yidhi Wasiir Farotoon.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Yaasin-Faratoon oo ka hadlay sababta Hargeysa loogu soo dhaweeyay Cali Khaliif Galaydh, waxa uu yidhi; “Cali Khaliif Galaydh waa la ogyah oo Jabhad Mucaarad ah ayuu Madax ka ahaa, wuxuu sheeganayey Maamul uu Madax ka yahay qaybo dalka ka mid ah. Dawladduna wadahadal ayey la gashay oo la doonayey in si qaboow lagu dhammeeyo, immika wadahadalkii ayaa socda, wax diidmo ah iyo wax laga hor-joogsaday inuu soo galana ma jirin, waxaana loo ictiraafsan yahay Muwaaddin reer Somaliland ah oo aamminsan fekrad aan u cuntamin dadweynaha inteeda kale, markaa taas uun baa wadahadalka keentay.”
Sidoo kale, Wasiirka Qorshaynta Qaranka Somaliland Maxamed Ibraahin Qabo, ayaa isaguna ka hadlay safarkan Galaydh, waxaanu sheegay inuu yahay Nin Reer Somaliland ah oo xaq u leh in Hargeysa iyo Somaliland-ba lagus oo dhaweeyo.
“Waannu soo dhawaynay Prof: Cali Khaliif Galaydh iyo Saraakiil sare oo Khaatumo ka socda oo doonaya inay ka qayb-galaan Shirkeennii qaybtii u dambaysay oo Jabuuti lagu qabanayo. Arrintaas Qof kasta oo Caqli leh oo reer Somaliland ah waxa uu u arkayaa inay guul arrintu tahay.” Sidaa ayuu yidhi Wasiir Qabo.
Waxaanu intaas ku ladhay; “Markaa, si fiican baannu u soo dhawaynay Cali Khaliif iyo Saraakiisha la socotay oo aannu uga dhoofinnay Madaarka Hargeysa; si ay uga qaybgalaan Shirka ka furmaya Jabuuti oo qaybtii hore ka furantay Addis Ababa, qaybtii labaadna Jabuuti ka furmayso oo ah qaybtii ugu dambaysay, inay ku soo gebo-gabawdo wanaag iyo Somaliland oo gacmaha is-haysata oo mid ah ayaannu rejaynaynaa.” “Cali Khaliif maxaa keenay baa nala weydiinayey, Cali Khaliif sharaf iyo wanaag ayuu ku soo maray waddankiisa oo ku yimi, waa Nin reer Somaliland ah, aan wadahadalnana waa aan heshiinno.” ayuu yidhi Wasiirka Qorshaynta Somaliland.
Cali Khaliif iyo Weftigiisu ka sokow soodhawaynta Masuuliyiinta Xukuumadda Somaliland ka tirsani ku qaabbileen, waxaa iyaguna sidoo kale ku booqday Huteel Ambassador, Hoggaamiyeyaasha Xisbiyada Mucaaradka ah ee UCID iyo Waddani, gaar ahaan Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan-Cirro oo ay weheliyeen Xubno Xisbiyadooda ka kala tirsan
Prof: Cali Khaliif Galaydh oo Hargeysa lagu soo dhaweeyey markii uu soo gaadhay Maanta, ayaa wakhti kooban ku nastay Huteel Ambassador ee magaalada Hargeysa, hase-yeeshee, wax War ah muu siinnin Warbaahinta, waaxana loo diiday inay Saxaafaddu wax Sawir ah ka qaadato, ka dibna waxay isaga iyo Xubno la socday Diyaarad ka raaceen Garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa, iyaga oo u sii dhaafay Hargeysa magaalada Jabuuti ee Caasimadda Jamhuuriyadda Jabuut oo lagu ballansan yahay inuu ka furmo wejiga labaad ee waddahadallada Somaliland iyo Kooxda Khaatumo. Waxaanay isku Diyaarad ka raaceen Hargeysa Wefti kale oo ka socda Xukuumadda Somaliland oo ka kooban xubno Wasiirro ah iyo Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID, Eng. Faysal Cali Waraabe.
Previous articleShirkadaha ugu waaweyn teknooligiyadda Mareykanka Apple, Facebook iyo Google oo maxkamadda geeyay dacwad ka dhan ah xayiraadda socdaalka ee Trump
Next articleJamaame-Alshabaab oo xubno ka tirsan meel Fagaare ah qoorta midi kaga jaray